Ukwabelana ngegama - Junior (Jr.) okanye "Okwesibini" (II)?
Kwisithangami Sokuzalwa Ngeliveki, umfundi uchaza ukuba ufuna ukubiza unyana wakhe emva komntakwabo-umkhulu wakhe-indlela enhle yokuzukisa ukhokho wakhe! Umbuzo, nangona kunjalo, ingaba oku kuya kwenza ukuba unyana wabo abe ngu-II - uJames Miles Burnum okanye uJames Miles Burnum II?
Kwamava am, ukusetyenziswa kwekota II ngokubanzi kubonisa unyana oye wabizwa ngelungu lentsapho ngaphandle koyise, njengotatomkhulu okanye umalume.
Kwakhona ngamanye amaxesha kusetyenziswa ukuchonga isibini sesibini kumgca wezinto ezintathu ngelo gama, nangona kwimeko apho iJunior iqhelekileyo ilungu elikhethiweyo. Ngokubhekisele ukuba ngaba kuyadingeka okanye akunjalo, ndiyakuthi ndikholelwe ukuba akunjalo. Imigomo enjengeJunior, II, III, njl. Njl. Yavela ekusebenziseni ukuhlukanisa phakathi kwamalungu amabini eentsapho kunye negama elifanayo, ngokubanzi ebonisa ukuba lamalungu entsapho ahlala ehlala. Ndiyakholelwa kwimeko kaYakobi Miles Burnum, kuba ukhokho ekubhekiselwe kuzo izizukulwana ezintlanu emva komthi weentsapho, ngokwenene umcimbi wokhetho lomntu - i-II ibe yindlela esemthethweni yokubonisa ukuba kwakukho wokuqala, kodwa efunekayo ukususela ekubeni umninakhulu omkhulu, omkhulu umdala uswelekile.
Andiyena ingcali yokuqamba igama lokuziphatha, nangona kunjalo, ngoko nantoni na oko abanye bathetha kulo mbandela:
Ukususela Kwigama - "Junior isetyenziswe ukuhlukanisa unyana kunye negama elifanayo noyise.
Iimeko ezilandelayo ziyasebenza:
U-Junior kufuneka abe yindodana kayise, kungekhona umzukulu.
Amagama kufuneka abe ngokufanayo, kuquka igama eliphakathi.
Utata kufuneka aphile.
'II' isetyenziswe naliphi na isihlobo esiseduze, kuquka umzekelo oyise okanye umalumekazi omkhulu, wabelana negama elifanayo njengomntwana. "
Ngokuqinisekileyo, baninzi banokuthi ngaba abantu bayasenyuka kwinqanaba njengoko amalungu omndeni afe, okokuba iJunior iba nguMatriki xa uyise efa, kwaye III uba nguJunior. Abanye, njenge-Miss Manners, bathi yebo, wonke umntu uyasusa inotshi [uMartin, uJudith. Isikhokelo soMntu weNkohlakalo kuMgaqo wokuziphatha ochanekileyo . Iincwadi zeWarner (1982)], ngelixa ezinye zifuna ukuba igama lakho eliseburhulumenteni, kuquka nesisombululo, asitshintshi. Kodwa ke ingxoxo enye imini ...
Ngaba unayo izimvo okanye ukhetho malunga nesihloko? Cofa kwi "comments" ngezansi uze usitshele oko ucinga!
Yintoni i-Oxygen Toxicity eScuba Diving?
Iimpawu eziqingqiweyo zoMlawuli waseRoma uMarcus Aurelius
Imiba yamaLuntu kunye noBugcisa